Gadaa Booranaa: Jili 'Gooroo Marmaaruu' maali? - BBC News Afaan Oromoo
Gadaa Booranaa: Jili 'Gooroo Marmaaruu' maali?
20 Guraandhala 2019
Madda suuraa, Guyo Wario
Abbaan Gadaa Booranaa Kura Jaarsoo Kuraa gooroo Areeroo irraa gara gooroo Liibanitti godaanan.
Abbaan Gadaa tokko erga baallii fuudhe marroo lama gara gooroo Liiban godaana jedhu hayyuun aadaafi seenaa Abba Jaatanii Diidaa.
Kan jalqaba erga baallii fuudhee ganna sadeessoo baatii Abraasaa keessa kan godaanu wayita ta'u, dabballee maqaa baasuu, gurra urachuufi dhaqna qabachuu dabalate jila jilatu hedduutu jira jedhu Abba Jaataniin.
Sirni wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa Boraanaa kan raawwatu Areerootti.
Gadaa Hawaas Abbaa Gadaa Karrayyuu tahuun baallii fudhatan
Hiikaa hirmaannaan abbootii Gadaa sirna siyaasaa biyyattii keessatti qabaatu
Abbaan Gadaa Booranaa Areerootti erga baallii fuudheen duuba ganna sadiif ardaalee jilaa gooroo Areeroo keessa marmaaree jila adda addaa jilata.
Ganna sadiin duuba garuu gooroo Areeroo irraa gara gooroo Liiban godaana.
Godaansa ykn imala gooroo ykn ardaa jilaa tokko irraa gara kaaniitti taasifamu kanaan Booranni Gooroo marmaaruu jedha.
Jili gooroo marmaaruu kan Abba Gadaa Kura Jaarsoo Dilbata [Guraandhala 17] eegale.
Liiban angafa Booranaati jedhama. Lafa jilti gurguddoon itti raawwatamullee achi jedhu Abba Jaataniin.
Abbaan Gadaa Booranaa tokko Liibanitti kallacha hidhata jedhan. "Gaaf Abbaa Gadaa kallacha hidhate, aangoo gugurdoo, murtii gugurdoo kan inni kennu, eegi kallacha hidhateen duuba" jedhu.
Jila kanarratti maal hojjetu?
Abbaan Gadaa Areerootti korma mataa gafarsaa qalee gara gooroo Liiban godaanuu eegale kan jedhan Abba Jaataniin, ardaalee jilaa maratti jilataa deema jedhan.
Jila kana keessaa qalmi isa guddoodha. Ardaa jilaa adda addaatti wanti qalanillee gargari.
Dhuguma Gadaa Meelbaatti mootummaan ni jijjiiramaa?
"Ardaa jilaa Guututti dullacha oobloo qala, achiin duuba korma randuu qala, achiin duuba afaan galaanaa qubatee korommii afaan galaanaa qala, achiin duuba dullacha dhalaa qala..." jechuun wal duraa duubaan ibsu.
Qalmi kun dhibaayyuu ykn irreeffannaadha jedhu Abba Jaataniin.
"Booranni akka Oromoo gar biraa marga jiidhaa qofaan hin dhibaafatu dhiigaan dhibaafata, aannaniin dhibaafata" jedhu.
Wanni qalaniif lafa sanatti dhibaafachuu ykn irreeffachuufi, lafa wayyoomsuufi, waaqa kadhachuufi jedhu.
Kanaan alatti jila dabballe maqaa baasuu, gadamoojjii irraa mataa buusuu, dhaqna qabachuufi gurra urachuu cufa raawwata Abbaan Gadaa.
Kun gaaf raawwate akkuma jilachaa Areeroo gara Liiban godaane ammas jilachaa gara Areeroo as deebi'a jedhu Abba Jaataniin. Kun hanga waggaa tokkoo fudhatas jedhu.
"Waggaa tokko guutuu ji'a ji'aan, guyyaa guyyaan, torbaniin jila raawwatamutu jira, guyyaan jila hin qabne hin jiru" jedhu.
Madda suuraa, Guyo Wariyo
Jili kun waggaa tokkoof waan turuuf fe'atanii godaanu
Areerootti deebi'ee korma mataa gafarsaa qaluun jila ega obbaasee booda uummata walitti baasee Gumii Gaayoo teesisa jedhu.
Gumiin Gaayoo Abbaan Gadaa baallii fudhatee waggaa afraffaa kan taa'amudha.
Aadaa Gumii Gaayoo keessaa tokko warri Gadaa maal hojjete kan jedhu qorachuudha jedhu hayyuun aadaa kun.
Waa'ee Gadaa wantoota shan
"Tarkaanfii ykn muraan Abbaa Gadaa dabarse, namni qulqullichi keessatti miidhame moo namuma yakkamaatu miidhame kan jedhufaa qoratu" jedhan.
"Wanni namni yakka seenuuf, wallaalcha moo jalluuf yakka seene?, yoo jalluu taate jallataa tarkaanfii irratti fudhatan, yoo wallaalcha taate, uummata aadaa barsiisaa, uummata seera barsiisaa jedhanii seera lallabaniif" jedhu.
Gumiin Gaayoo hojii abbootii Gadaa erga qoratee booda seera lallabuun goolabama.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo: Booranni kutaa hinqabu aadaa tokkoon bula Aabbaa Gadaa tokkoon bula
13 Muddee 2018
Alamaayyoo Haayilee : ''Gadaan Meelbaa gadaa qabbanaati, gadaa horataati''
Aadaa: Abbaa Gadaa Gadaa Hawaas Abbaa Gadaa Karrayyuu tahuun baallii fudhatan
23 Amajjii 2019
2 Caamsaa 2018
Waa'ee Gadaa wantoota beekuu qabdan shan
'Ammallee reeffa funaanaa jirra' - jiraattota Aanaa Hawwaa Galaan haleellaa irraa hafan
4 Adooleessa 2022
Itoophiyaa fi Sudaan dhibdee isaanii mariin furuuf waliigaluun 'milkaa'ina guddaadha'
Sa'aatii 3 dura
Itoophiyaatti waraanni Tigraay gidiraa Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhokseera-HRW
5 Adooleessa 2022
Sagantaa nyaataa mana barumsaa 'qabxii barattootaa fooyyessaa jiru'
1 Adooleessa 2022
'Kaayyoo Haacaaluu itti fufsiisuun, gaafan isa dhabe waadaan ofii galedha'
30 Waxabajjii 2022
Dhuguma Itoophiyaan qamadii alaa galchuu hambistee, alatti arguu dandeessii?
Namoonni haleellaa Gimbiin ajjeefaman 338 ta'uu mootummaan hime
Dhibdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan muddama haaraa dhale
28 Waxabajjii 2022
Haacaaluu Hundeessaa: Artistiin 'Oromoof qaalii' walleen qabsaa’e yoo yaadatamu
8 Fuulbaana 2020
Ajjeechaa Gimbii qorachuuf koreen Majiliisa Oromiyaa hundeesse maal hojjechuuf karoorfate?
29 Waxabajjii 2022
Humni Sudaan ollaawwan Itoophiyaa daangaatti kalaa'an meeshaa waraanaa gurguddaan haleele
Dhedheeroon Itoophiyaa lamaan, Nagawoo fi Yeneenesh, dhuguma waal kaadhimmatanii?
Hiriyoota sadan Yuunvarsiitii Ambootti daree tokko keessaa A+ tarreessan
Hanqina boba'aa Finfinnee fi magaalota kaanitti mul'ate maaltu uume?
Kiristaanoo Ronaaldoon gara Chelsii deemuufii?
Aayyoo dargaggummaa hanga dullumaatti Oddoola Haroo Dambalirra qofaa jiraatan
'Roobii abjuun maqaashee argeen Jimaata qubeelaa godhanne'
US’tti poolisootni dargaggeessa guraacha rasaasa 60 oliin rukutanii ajjeesan